Muuqaalka in Android - Transfer Xiriirada ka Outlook in Android
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Outlook in Android
Haddii aad iibsato telefoonka ah Android, oo ay isku diyaarineyso inay dajiyaan lambarada telefoonka ama xiriirada ka Outlook in telefoonka cusub. Waa la qiyaasi karo inay aqbasho xiriirada mid mid haddii aad leedahay boqolaal xiriiro. Taa ka sii daran, haddii aad xiriirka la leedahay jira in ka badan SIM ah qaban karto, ma ahan oo keliya ee aad ku qori kartaa kaarka SIM in ay telefoonka aad Android si ay u gudbiyaan xiriirada. Dhab ahaantii, hal hab fudud waa inay u hagaagsan xiriirada ka Outlook in phone Android .
Siyaabaha u hagaagsan xiriirada ka Outlook in phone Android:
Mulkiilayaasha qaar ka mid ah qalabka HTC sida 4G EVO u isticmaali kartaa HTC nidaameed 3.0, taas oo si gaar ah loogu Microsoft Outlook iyo Windows Cinwaanka Book-syncing app ah. Waxaa synchronizes xiriirada iyo kalandar ka Outlook in Android . Si kastaba ha ahaatee, HTC nidaameed 3.0 ma leh dhammaan taleefanada HTC shaqeeyaan, oo kaliya qaar ka mid ah telefoonada cusub ugu dambeeyay. Hit goobta HTC ayaa si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama kala soo bixi nidaameed 3.0.
Iyo telefoonada aad u tiro badan Android haysan fursado u hagaagsan Muuqaalka lacag la'aan ah, ama telefoonada qaarkood ma aha in aad ha xiriirada Muuqaalka hagaagsan oo Android mar. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad soo dhoofsadaan iyo dhoofinta CSV gudbiyo buuxa ee xiriirada. Markaas waxaa laga yaabaa in aad u leexdo xagga MobileGo , kaas oo awood kuu inay dajiyaan xiriirada ka Outlook in Android si degdeg ah oo ku haboon.
Tallaabooyinka fudud si ay u gudbiyaan xiriirada ka Outlook in Android:
Halkan waxaad ka heli doontaa sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Outlook in tallaabo Android talaabo.
Download MobileGo aad kombuutarka. Waxaa Launch. Markaas xirmaan telefoonka aad Android in aad PC. Your PC ogaan doonaa qalab aad si toos ah.
Wondershare MobileG si buuxda u la jaan qaada telefoonada kala duwan Android iyo kiniiniyada. guji taageerayaan Android Qalabka si aad u hesho informaiton dheeraad ah.
Talaabada 2: ka Outlook dhaqaaq xiriirada si Android
Tag "Xiriirada" Tab, oo guji "Import" in ay doortaan "Import xiriirada ka your computer". In liiska hoos-hoos u, ay doortaan in ay dajiyaan xiriirada ka Outlook 2003/2007/2010/2013 ama Outlook Express.
Dooro warsan xiriir ah si loo badbaadiyo xiriirada laga keeno. Markaas barnaamijkan bilaabi degsado xiriirada Muuqaalka in Android. Ka dib markii ay si guul leh u soo degsado, xiriirada lagu soo bandhigi doonaa account xiriirrada. Waxa kale oo aad u guuri kartaa xiriirada gaarka ah in koox kasta oo aad jeceshahay halkan.
Haddii aad leedahay xisaab Muuqaalka telefoonka aad Android, inaad telefoonka aad u hagaagsan Android karo xiriirada waa in si sahlan.
MobileGo waa tababare macluumaadka telefoonka Android fudud oo wax ku ool ah si ay u gudbiyaan xiriirada si Android. Marka laga reebo syncing Muuqaalka in Android phone, waa la heli karaa si aad u maareeyaan iyo gurmad aad xiriirada si aad PC, diinta videos in qaabab ugu haboon ee aad telefoonada Android, ama gurmad iyo celinayo codsiyada la mid click.
Video hoose wuxuu ku Hanuunin Dadka sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Outlook in Android.